Xildhibaano Soomaaliyeed oo Maanta Dowlada Mareykanka ka codsaday inay joojiyaan Maxkamadeynta Jen.Samatar – Puntland Voice
Xildhibaano Soomaaliyeed oo Maanta Dowlada Mareykanka ka codsaday inay joojiyaan Maxkamadeynta Jen.Samatar
June 9, 2010 3:50 pm Views: 19
Xildhibaano Soomaaliyeed oo tiradiidu tahay 64 mudane islamarkaana ka soo kala jeeda 14 beelood loona yaqaan beelaha Shanaad ayaa Maanta kulan gaarah ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Xildhibaanadaanadaani ayaa kulankooda kaga codsaday Dowlada Mareykanka inay gabi ahaanba joojiso Makamadeynta lagu hayo jen.Maxamed Cali Samatar ay soo eedeeyeen shaqsiyaad ka soo jeeda Gobolada Waqooyi Galbeed iyagoo ku doodaya inuu horseed ka ahaa xasuuq loo gaystay dad ka soo jeeda Goboladaasi.
Xildhibaanadu waxay sheegeen in sharciga lagu haysto janaraalka uu yahay mid soo bay 1991-dii iyadoo danbiga ay ku edeynayaan uu 20 sano ka horeeyay janaraaka sidaa darteed waxay ka xuseen Xildhibaanadu inaanu wax danbi ah isaga si gaar ah u gelin looguna makamadeyn Karin madaama waxa dacwaa loo haysyo yihiin dhamaan Madaxdii Dowladii xiligaasi jirtay.
Sidoo kale Xildhibaanadu mar ay ka hadlayeen arintaani waxay xuseen in wixii dhib ah eek ala gaaray shacabka soomaaliyeed 21-kii sano ee ay talineysay Dowladuu Kacaanka ahayd looga heshiiyay shirariidibu heshiisiin ee ka dhacay Boorame iyo Bar bara oo ka tirsan Gobolada Waqooyi, Jenaraal Samatarna uu ka mid ahaa shacbigaku abtirsada Goboladaasi.
Xilhibaanada kulanka maanta waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Jen.Maxamed Maxamuud Xeyd,Xildhibaan Mowliid Macaane Maxamuud iyo Xildhibaan C/fitaax Ibraahim Rashiid kuwaasoo sheegeen in shaqsiyaadka dacwada u haysta jernaraal Samatar ay yihiin kuwo si gaar ah u doonaya inay sharaftiisa iyo karaamadiisa meel kaga dhacaan , wax danbi ahna uusan jenraal Samatar si gaar ah u gelin.
“waxaan ka codsaneynaa Dowlada Mareykanka in hadii jen.samatar la maxkamadeynaayo lagu soo daraa jenaraalada mareykanka ah ee Howlgalada ka fulinaaya xiligaan dalalka Ciraaq iyo Afgaanistaan” ayaa war ka soo baxay Xildhibaanadaas
Sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen inay Dowlada Mareykanku ka fiirsato arintaasi,waxaa kale oo ay sheegeen mudanayaashu in waxa loo haysto Jenaraakaay ka weyn yihiin kana xanuun badan yihiin waxa manta ka dhacaya guud ahaan Dalka Soomaaliya oo ah dhimashada iyo dhaawaca,waxayna sidoo kale is weydiiyeen waxaas dhacaya ma waxaa loo maxkamadeynaya Dowlada manta Dalka ka jirta,Amisom,Ashabaab iyo Xisbul Islaam,iyagoosi gaar ah uga codsaday shaqsiyaadka arintaan sida gaarka ah u wada inay ka tanaasulaan, loona tixgeiyo jenaraaka maganyada uu ku joogo dalkaasi Mareykanka.